राउटे भेट्न टिकट ! « Khabarhub
काठमाडौं-बस्ती छिर्न टिकट ! सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। हो, दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सुरक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको छ। राउटे जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको समुदाय हो। यो समुदायको छुट्टै भाषा र संस्कृति छ। सामाजिक रूपान्तरणको चरणमा रहेका राउटे समुदायको बस्तीमा पुग्नेको संख्या बढेपछि गाउँपालिकाले यसलाई पर्यटन व्यवसायका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
बुबैराखेस्थित राउटे बस्तीमा तारबारको काम थालिएको छ। बस्ती खुला हुँदा बाहिरबाट मानिस जथाभाबी प्रवेश गर्न थालेको र राउटेलाई कुलतमा फसाउन थालेपछि तारबार गर्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तारबारसँगै राउटे बस्तीमा दुई जना चौकीदार पनि राखिनेछ। उनीहरुले नै बाहिरबाट आउने मानिसलाई टिकटको आधारमा मात्र प्रवेश दिनेछन्। यसले राउटे पनि सुरक्षित हुने विश्वास छ। अर्कोतर्फ राउटेको नाममा आउने राहत र सहयोगको पनि तथ्यांक हुने र सहयोगमा दोहोरापना पनि हट्ने गाउँपालिकाको तर्क छ।
प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०७६, शुक्रबार ७ : ०७ बजे